QM Oo Kumamaan Qaxooti Ah Ka Soo Celisay Xeryaha Dhadhaab - Xigasho.net | Xigasho.net
QM Oo Kumamaan Qaxooti Ah Ka Soo Celisay Xeryaha Dhadhaab
Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in Qaxooti tiradooda ay kor u dhaafeyso 75,000 oo Soomaali ah ay 3-Sano ee la soo dhaafay ka soo celisay Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Warbixin ay soo saartay hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR ayey ku sheegtay in dhamaan dadka Qaxootiga ah ee ay dib ugu soo celiyeen Soomaaliya ay u mareen shuruucda Qaxootiga Caalamiga ah, iyadoo sheegtay dadkaasi ay si iskood ah u dalbadeen in ay dib ugu noqdaan dalkooda.
UNHCR ayaa xustay in Qaxootiga ay ka soo celiyeen Xeryaha Dhadhaab ay badankood gaarsiiyeen magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ee koonfurta Soomaaliya.
Denis Alma oo ka tirsan xafiiska UNHCR ee Xeryaha Dhadhaab ayaa sheegay in dadka Qaxootiga ah ee ay dib ugu celiyeen Soomaaliya ay gaarsiiyeen deegaano amnigooda la’isku haleyn karo ,isaga oo intaasi ku daray in ay bixiyaan Lacagaha Sahayda ah ee ay adeegsadaan dadka Qaxootiga ah ee dalbada in ay dib ugu noqdaan dalkooda.
Dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2013-kii heshiis saddex geesood ah ku gaaray in si aan qasab ah dalkooda dib loogu celiyo Qaxootiga ku jir Xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari.
Todobaad ka hor ayaa waxaa warbixin ay soo saartay hay’adad xuquuqda aadanaha ee amnesty international ku sheegtay in Dowladda Kenya ay qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira Dhadhaab ku cadaadiso in ay dib ugu noqdaan dalkooda